यि ४ राशिलाई ९बर्ष पछि राहुकेतुले छोडेर जाने भएकाले मिल्ने छ ठुलो सफलता,कुन कुन राशि हुन त?
ज्योतिषशास्त्रीका अनुसार हरेक व्यक्तिको जीवनमा खुशी र प्रगतीमा ग्रहको राशिमा हुने प्रभावमा निर्भर हुने बताउछन् । जसले गर्दा राहुकेतुलाई शास्त्रमा निकै महत्वकासाथ हेरिन्छ । त्यसैले ९ वर्ष पछि राहूकेतुले यी ४ राशिलाई छोडेर जादैछ । यदि तपाईको राशी परेको छ भने हेर्नुस् ।
मिल्नेछ जीवनकै सबैभन्दा ठुलो सफलता । कुन कुन हुन् ती राशीहरु ?
कर्कट राशि यो राशी हुनेहरुको लागी पनि राहु केतुको नराम्रो प्रभाव हटेर जाने भएकाले निकै शुभ समय रहेको छ । जसले गर्दा अड्किएका कामहरु बन्नेछ । प्रशस्त आर्थिक लाभ हुने र अध्ययनमा सफलता हात पर्नेछ ।
सिंह राशि यो राशीहुनेहरुको लागी पनि राहुको प्रभाव छोडेकाले जीवनकै ठुलो सफलता मिल्नेछ । जसको प्रभाव प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सफलता मिल्नुका साथै धन लाभ पनि हुनेछ । त्यस्तै नयाँ जागिरका अवसरहरु मिल्नेछ ।
मकर राशी मकर राशी हुनेहरुको लागी पनि अबको समय निकै राम्रो रहेको छ । चिताएका र अडकिएका कामहरु बन्नेछ । साथै आर्थिक लाभ पनि हुनेछ । र वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ ।
वृश्चिक राशि यो राशी हुनेहरुको लागी पनि राहुको प्रभाव हट्ने भएकाले अति शुभ समय रहेको छ । त्यसैले यो राशीलाई मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढनेछ । परिवारमा सुख, शान्ति छाउनेछ । साथै रोकिएका कामहरु बनी आर्थिक लाभ हुनेछ ।
काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बढाएको तलब आजदेखि लागू हुनेछ । कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले करिब साढे ५ लाख हाराहारी संख्यामा रहेका कर्मचारीको तलब साउन १ देखि लागू हुने गरी बढाएको हो । कार्यालय सहयोगीदेखि नायब सुब्बासम्मको तलबमा २० प्रतिशत र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
झन्डै साढे दुई लाख हाराहारी रहेका सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सनसमेत वृद्धि भएको छ । पूर्वराष्ट्रसेवकहरूको पेन्सनमा जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएको हो, त्यही पदको बहालवाला कर्मचारीको बढेको तलबको ६६ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।
सबभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी कार्यालय सहयोगीको तलब १६ हजार २ सय ३० बाट ३ हजार २ सय ४६ बढेर १९ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । सबभन्दा माथिल्लो तह मुख्यसचिवको तलब ५५ हजार २ सयबाट ९ हजार ९ सय ३६ बढेर ६५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । खरिदारको तलब २२ हजार १ सय ७० बाट ४ हजार ४ सय ३४ बढेर २६ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबै तहका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता, वाषिर्क ७ हजार ५ सय कपडा भत्ता बजेटमा यथावत् राखिएको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सय प्रतिशतसम्मको प्रोत्साहन भत्तासमेत यथावत् छ ।